EyeThupha 20, 2018 admin
Chaincode uqala bootcamp Lightning Network
Chaincode Labs’ Bitcoin Developers vo sungula a 1 ngeveki bootcamp ukufundisa Bitcoin kwaye blockchain kubaphuhlisi web kungekho ulwazi lwangaphambili Bitcoin, ezama, njengoko Chaincode zenjneli Bitcoin software kumlondolozi Marco Falke uthe, ukudala anobuchwepheshe “abantu abaqhelekileyo kwi esitratweni, ababhekisi hayi ingumnqa.”
umemezele ngoMvulo, Chaincode uqala entsha “yokuhlala” eNew York, ngo October, omnye eziya kujolisa ekuncedeni abaphuhlisi ethi apps zabo Lightning Network, kwiinzame luyakunceda ukusetyenziswa Bitcoin kwakunye nokufundisa abantu LN. Falke waqhubeka: “Kukho zokusebenza ezininzi kwaye awukwazi ukuya evenkileni uze uhlawule ne Bitcoin. Kukho yonke le nto ayikho. Sasicinga ukuba bekuya kuba mkhulu ukufumana ezinye app ababandakanyekayo ukuba babe websites lokwakha, kodwa akukho mfuneko yokuba nabani na imvelaphi e Bitcoin okanye Lightning… ngabanye, Ndicinga yonke imihla silinde izicelo Lightning ziya kulibazisa Lightning and Bitcoin. Kubalulekile ngenene ukwenza oku nto app ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka.”
Ingxelo Daily Market Kraken for 19.08.2018
$54M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
BITCOIN mabahlambe NGEZANTSI $5,000!...
Post Previous:Blockchain News 17.08.2018